extra-width ကို Extrusion Coating & အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက် - တရုတ် Qingdao Shicheng ပလတ်စတစ်
အပေါ်ယံပိုင်း & အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်နှင့်ပုံနှိပ်စက်
အပေါ်ယံပိုင်း & အလွှာပြုလုပ်ခြင်း ...
extra-width ကို Extrusion Coating & အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်
Classicx စီးရီး Extra-width ကို Extrusion Coating နှင့်လမိုင်းလိုင်းတစ်စိတ်ကြိုက်မြင့်မားထုတ်လုပ်မှုလယ်ပိုင်းနှင့် FEEC ကဒီဇိုင်း Hi-အဆုံးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ပလပ်စတစ်ယက်ထည်နှင့်အတူ laminated coated ခံရဖို့ကုန်ကြမ်းအဖြစ် PE / PP အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်နည်းပညာကဒီဇိုင်းနှင့်သုတေသနပြုသည်။ ဒါဟာအပို-ကျယ်ပြန့်ထည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် high-performance ကိုပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ Applications ကို: ဒါဟာကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ sunshade ပုဆိုး, တာပေါ်လင်, ရေ-အထောက်အထားပုဆိုး, ပထဝီအဖြစ်အပို-ကျယ်ပြန့်ပလပ်စတစ်ယက်အထည်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည် ...
Classicx စီးရီး Extra-width ကို Extrusion Coating နှင့်လမိုင်းလိုင်းတစ်စိတ်ကြိုက်မြင့်မားထုတ်လုပ်မှုလယ်ပိုင်းနှင့် FEEC ကဒီဇိုင်း Hi-အဆုံးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ပလပ်စတစ်ယက်ထည်နှင့်အတူ laminated coated ခံရဖို့ကုန်ကြမ်းအဖြစ် PE / PP အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်နည်းပညာကဒီဇိုင်းနှင့်သုတေသနပြုသည်။ ဒါဟာအပို-ကျယ်ပြန့်ထည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် high-performance ကိုပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကျယ်ပြန့်အများဆုံးအကျယ် 6200mm အထိရှိနိုင်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို sunshade ပုဆိုး, တာပေါ်လင်, ရေ-အထောက်အထားပုဆိုး, geotextiles, မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်ထုပ်ပိုးအထည်, Flex နဖူးစည်းစာတမ်းအဖြစ်အပို-ကျယ်ပြန့်ပလပ်စတစ်ယက်အထည်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည်။
စက် overhead-type အမျိုးအစား extruder ချမှတ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကွဲပြားခြားနားသောအဆောက်အဦများချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
နှစျခု extruder နှင့်ပိုက်ဆန်လျှော်သေတစျခုဖြစ်စဉ်တွင်နှစ်ဆခြမ်းလမိုင်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်;
ဒါဟာရေဂျက်အခန်းထဲမှာထည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကို double-ခြမ်း squeezer နှင့်လေမှုတ်စက်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Corona treater နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းယူနစ်လမိုင်းပြီးနောက်ပုံနှိပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပုံစံလိုအပ်သူထုတ်ကုန်များအတွက်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်
အဆိုပါအလွှာပြုလုပ်ခြင်းပုဒ်မသုံးခု roller ပြက္ခဒိန်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်ကြောင့် max ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စာရွက်များထုတ်လုပ်ဘို့သင့်လျော်သည်။ 3mm မှတက်အထူ;
လမိုင်းမြန်နှုန်းဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ 150m / မိနစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ယူနစ် SJ120 / FMS3200 SJ150 / FMS4200 SJ180 / FMS4500 SJ200 / FMS6200
အလွှာပြုလုပ်ခြင်းအကျယ် မီလီမီတာ 2500-3100 3600-4100 3000-4300 5000-6100
အလွှာပြုလုပ်ခြင်းထူ အွမ် 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
စက်မှုလိုင်းအမြန်နှုန်း မီတာ / မိနစ် 20-200 20-200 20-150 20-200
ဝက်အူအချင်း, L / D မီလီမီတာ Φ120× 33 Φ150× 33 Φ180× 33 Φ200× 33
roller ရှည် မီလီမီတာ 3200 4200 4500 6200
ကို T-Die နှုတ်ခမ်းရှည် မီလီမီတာ 3250 4250 4600 6250
Max.Unwind / ပြန်ရစ်လိပ်အချင်း မီလီမီတာ 1200 1200 1200 1200
စုစုပေါင်းပါဝါ KW 210 350 400 420
air ကိုစားသုံးမှု M က 3/ မိနစ် 0.8 1.0 1.2 1.2
အေးရေ M က 3/ မိနစ် 0.8 1.0 1.2 1.2
စုစုပေါင်းအလေးချိန် တန်ချိန် 34 46 55 65
လိုင်း Size ကို (L ကို× W × H ကို) မီတာ 12 × 18 × 4.5 14 × 20 × 4.7 14 × 22 ×515 × 23 × 5
ယခင်: Extrusion Coating & အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်
အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Extrusion လိုင်း
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Extrusion လိုင်း
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းလိုင်း
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Lines
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Machinery
extra-အကျယ် Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Extrusion လိုင်း
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းလိုင်း
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Lines
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်း Machinery
Extrusion Coating ပြီးတော့အလွှာပြုလုပ်ခြင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Extrusion Coating & အလွှာပြုလုပ်ခြင်းစက်